Life of ubutyebi
Le slot leyo bayidlalele an online Azisekho mobile idiphozithi ukhululeka yi Microgaming. Le slot ikuvumela ukuba amava yokuphila ngusozigidi kunye nethuba ukuyenza ibe yimpumelelo. Kunye iisimboli zodidi ezifundiswayo kunye neempawu ezilula ibhonasi, le online Azisekho mobile idiphozithi liye laba imo okusemandleni ukuba sneak embalwa imizuzwana ukukhanya ucwangciso lwakho matimba ukuba amazwe atyebileyo.
Eziphambili inikelwe Life of Ngobutyebi
Oku kuza njenge slot ezintlanu bayotywe kunye bekwizintlu ezintathu kunye paylines amathathu esisigxina. In the background, unokujonga i ekwazi ngentsholo leyo azisonti ngaphakathi isakhelo ibomvu-zibiyelwe. Inika inkangeleko ethile uhlobo enomtsalane lodongo eludongeni igumbi lokutyela.
Oku kwiindawo zokubeka online akukho mobile idipozithi inika iintlobo ezahlukeneyo zeesimboli. Isimboli engundoqo kumngxunyana zenziwa nokuxhasa nomxholo esisiseko. Ezintlanu ke kuzo features intombazana kwiindawo ezininzi ezifana ukuma nge jet yabucala, okanye ekhasino, kwimoto fast, larhabula cocktail kwamanye kwezikhephe kwaye kwiklabhu yegalufa. Kunye nale, iisimboli ixabiso elingaphantsi luyilwe ngobuchule kwakunye. Ziquka i jet, kwezikhephe, imoto Posh, ezinye uhlobo a yomthwalo, ipasipoti ezinye elanga.
Ngaphandle koku, slot linikeza ezithile kwiimpawu ezithile kwakunye. The Life of Kobutyebi logo ngomnye wabo yaye ibizwa ngokuba isimboli zasendle umdlalo slot. It Ungaphinda-phinda nayiphi win ngo '2x' nawethutyana, kuzo zonke iisimboli ngaphandle siwachithe umhlaba. Uphawu Wazibhangisa kumngxunyana sele zibekwe phezu reel.
Ubandisile ke dollar zakho
Slot linganiki iimpawu ezininzi zokudala kuthelekiswa kwabanye kodwa ungasoloko ubuye lo ukuba awuyithandi uhlobo entsonkothileyo kakhulu kwiindawo zokubeka. Ukuba ngaba labaqalayo, ngoko eli zokubeka online akukho mobile idipozithi senziwa nje wena, njengoko akukho mfuneko yokuba wenze naluphi na utyalo-mali phambi kokuba idlala.